मोडल गहना वशिष्टले गरिन फेरी अर्को तमासा – Classic Khabar
September 12, 2021 115
पो’र्नोग्रा’फी गरेको अभियोगमा व्यापारी राज कुन्द्रा गिरफ्तारीमा परेपछि बलिउडमा यसकोको चर्चा फेरि बढेको छ । सोही प्रसंगमा जोडिन आएकी छिन् मोडल गहना वशिष्ट । गहनालो एउटा न्यु’ड फोटो सुट गराएकी छिन् । जुन फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्यो । कतिले यो फोटो पनि राज कुन्द्राले नै गराएको टिप्पणी गरे ।
Prevपशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको ११ किलो सुन कता हरायो ?
Nextएक्लै लोकबहादुरले कसरी गरे ६ जनाको नरसंहार? प्रहरीलाई पनि खड्कियो यस्ता प्रश्न ?